Die Casting ထိရောက်သောနှင့်ချွေတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဒြပ်ထုဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဤသေခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သက်တမ်းရှည်စေပြီးအမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
သွန်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မီးဖို၊ သွန်းသောသတ္တု၊ သွန်းလောင်းသောစက်နှင့်သွန်းရန်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ထားသောသေတ္တာများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်သည်မီးဖိုထဲတွင်အရည်ပျော်သွားပြီးသေဆုံးသောသံမဏိစက်သည်ထိုသတ္တုကိုသေတွင်းထဲသို့ထိုးသွင်းသည်။
P&Q တွင်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက်ရုံမရှိဘဲဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အလင်းရောင်နှင့်လမ်းပရိဘောဂများအသုံးပြုခြင်းတွင်သေးငယ်သောမှကြီးမားသော P&Q ပလပ်စတစ်ထိုးဆေးအစိတ်အပိုင်းများ။
P&Q သည်စာရွက်သတ္တုစက်ရုံမရှိပါ။ သို့သော်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအရွယ်အစား၊ အဓိကအားဖြင့်အလင်းရောင်နှင့်လမ်းပရိဘောဂအသုံးအဆောင်များ။
P&Q ပိုင်စက်ရုံစက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Zhejiang၊ Haining တွင်တည်ရှိသည်။ ၆၀၀၀ m2 ထက်မနည်းပါ။
လမ်းအလင်း -PQSL003 LED
ပါဝါ: 80W, 150W
2. CREE ချစ်ပ်များ> 100lm / w
၄။ သတ္တုစပ် (Die casting aluminium) ၅။ သက်တမ်း -> ၅၀၀၀၀ နာရီ
လူမီနီယံ bulkhead အလင်းချ။ Die
1. 9w, 12w, 18w, 24w ။ 5295 × 83
2. Samsung က 5630> 95lm / w ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
4.die casting aluminium + white white diffusion:
5.Lifespan:> 50000 နာရီ
6.Available function: အာရုံခံကိရိယာ၊ အရေးပေါ်
7. IK10 အီး RoHS
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP65, IK10, အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်း application များအတွက်အကာအကွယ် bulkhead စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ဤအိမ်သည်အပြည့်အဝအရည်အသွေးမြင့်မားသောကာဗွန်နိတ်နှင့်သေဆုံးသောအလူမီနီယံကို အသုံးပြု၍ ဤတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်
အသေခံသတ္တုကိုယ်ထည်၊ Hummer Slim LED PRO ကြံ့ခိုင်သောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် LED မီးချေးခြင်းသို့မဟုတ်ချွေတာနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးတပ်ဆင်ထားသည်။ Hummer ၏ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်အကွာအဝေးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အအုံများ၊ ကျောင်းများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မြင့်မားသောဖျက်ဆီးခြင်းဒေသများအပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အများပြည်သူအတွက်အဆင့်အတန်းများအတွက်ခက်ခဲမှုရှိကြောင်းသက်သေထူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောသမိုင်းရှိသည်။ Lumen Select Technology ကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ထိရောက်မှု ရှိ၍ စွယ်စုံဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သောဂီယာကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
အသေခံသတ္တုကိုယ်ထည်၊ Hummer LED PRORobust သည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် luminaire ။